Google Mepu inodzosera Apple Watch uye CarPlay | Ndinobva mac
Google Mepu yadzokera kuApple Watch uye CarPlay
Yakanga iri gore ra2017 apo Google yakasarudza kuti iyo yekushandisa application inofanira kunyangarika paApple Watch. Kubva ipapo, isu vedu tanga tichida kuve nematanho kunzvimbo uye nekutarisa nguva, isu takafanirwa kugadzirisa izvo Apple Mepu. Ichi chishandiso pachacho hachina kushata, asi ndinofanira kubvuma icho chinhu chidiki chandinofarira nezveGoogle ndiko kufamba kwayo. Dai zvisiri izvo zvekuti ini ndinonzwa kutariswa, ini ndaizoyedzwa kuiisa pane angu ese michina.
Google Mepu iri kudzoreredza nzvimbo yayo mukati meiyo Apple zvakasikwa. Kuenderana kwaro neApple Watch kwakaziviswa. Tinogona kusarudza izvo zvakafanana senge nekombuta. Tinogona kuenda kukero tichisarudza nzira yekutakura, pakati pemotokari, bhasikoro, kutakura veruzhinji kana netsoka. Isu tine anofungidzirwa anosvika nguva uye nhanho-nhanho-nongedzo kunzvimbo dzatakambo gadzira, senge kumba, basa, kana chero imwe yakasarudzwa nesu. Navigation ichave inoenderana neyeiyo iyo iPhone, saka tinogona kutanga kubhurawuza kubva kufoni uye kuenderera kubva wachi.
Tichafanirwa kumirira zvishoma kuti tikwanise kunakidzwa neGoogle Mepu paApple Watch. Nekudaro, izvo zvatinogona kushandisa iyi yekufambisa system kubva kuCarPlay. Kubatanidzwa uku kunowanikwa kubva nezuro pane dzese mota dzinowirirana neCarPlay pasi rese.
NeCar Play, tinogona kuita kuti zvionekwe dzoka-ne-dzoka kufamba pamwe ne odhiyo kutonga (mimhanzi, podcast, audiobooks, nezvimwewo) uye zviziviso zvekarenda. Yakaunzwa neIOS 13, mepu inoonekwa kuruboshwe mubhokisi rakakura, nepo kumusoro kurudyi iri nzvimbo yakasarudzwa kuratidza inotevera nzira. Izvi zvese zviri kuitika nekuti kumashure munaKurume, neIOS 13.4, Apple yakabvumidza yechitatu-bato yekufambisa mapurogiramu kuti aoneke mune ino yakatsemuka-skrini maonero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Google Mepu yadzokera kuApple Watch uye CarPlay
Kufananidza kugadzirisa kune vhezheni 16